Tsamba yekusiya basa, maitiro ekuzviita uye iwo akanakisa matipi | Ehupfumi Zvemari
Tsamba yekurega basa
Chekutanga pane zvese, ngatitange nekutsananguraChii chinonzi kusiya basa?, iri pfungwa inoreva zvinoitwa nemushandi maererano nekusiya basa kana kusiya chinzvimbo pabasa ravo.
Izwi iri rinobva muchiLatin dimissio zvinoreva kuti munhu ari kuita chiito, chinova chinhu chimwe chete. Mune mamwe mazwi, chero munhu ari pasi pemutero uyu afunga kuzvisiya basa. Saka kusiya basa kwakasiyana nekudzingwa, uko mukuru webasa kana masimba anosarudza kumisa zviitiko zvemushandi uye kubvisa chinzvimbo chake.
Kazhinji kazhinji, vanhu vanotora sarudzo yekurega basa, Nezvikonzero zvakasiyana senge matambudziko nevatenzi vavo uye pakati pezvikonzero zvakajairika, tinogona kuona kuti mamwe mamiriro akambomisikidzwa haana kuteedzerwa, senge anogona kunge asina kuitwa. kubhadhara kwemubhadharo wako panguva yakatarwa, kushayikwa kwemubhadharo paunogara nguva yekuwedzera pabasa sekudikanwa uye chisungo chinopinda pabasa rako uye muhoro wabviswa. Tinogona zvakare kusangana ne kushungurudzwa kwesimba, uko kunogona kuve nekushungurudzwa pabonde kana kushungurudzwa kwakadai sekunyadziswa kwemushandi pamberi pevamwe vanhu vanoshanda munzvimbo iyi nekuwedzera kushayikwa kwekugutsikana kana kuzivikanwa kwesimba rakaitwa.
Hapana munhu anosungirwa kutsungirira kusabatwa zvakanaka kana mhando dzekusabatwa zvakanaka kubva kuzviremera zvavo kana maboss. Nechikonzero ichi hazvina hutano kugara munzvimbo iyoyo uye chengetedza iko kushushikana kwaunonzwa. Saka hupenyu hwekushanda hauna kufanana nehupenyu hwedu hwakajairika Uye kana paine kusabatwa zvakanaka, kupopota, kutyisidzirwa kana kushandiswa zvakanyanya, izvi zvichave nemhedzisiro pane ramangwana rehunyanzvi remubati kana kambani.
Inokurudzirwa mushandi anoita nehanya zvakanyanya mumatambudziko aya, sezvo zvaigona kuunza matambudziko munhoroondo yebasa rako, saka zvakakosha kuti urambe wakadzikama uye uine pfungwa dzakanaka, uine kurapwa mukati meruzivo rwakanaka kunyangwe zvichizofungidzirwa kuti kurudziro iyi haina kunaka.
Tora danho rekusiya basa ndere kana paine matambudziko akakomba Pakati pehukama hwehukama nevashandi pamwe nevabati, mune yekusiya tsamba, inogona kuwedzerwa nenzira yakakodzera nemutauro wakakodzera uye pasina kunetsa. Izvo zvinotsvakwa pano kunyora zvese mamiriro asina kunaka, achivarondedzera zvakadzama, asi nenzira ine chinangwa zvekuti izvi zvinoreva kuti kusiya basa ndiyo chete nzira inonzwisisika yekubuda mukutarisana nekushungurudzwa kwevashandi vakawanda
Izvo zvakakosha kuti mu tsamba yekusiya inotaura zvese zvakadzidzwa uye mabhenefiti akawanikwa panguva yekushanda mukambani iyoyo, pamusoro pekuti zvinotinetsa zvakadii uye zvinorwadza kuzviona tichimanikidzwa kumusiya uye kumusiya, asi kuti ndiyo chete nzira yekubuda iyo ichaunza kukwirisa kwenguva mbiri dzakatarisana:
Zvinotiisa pamusoro pechinetso nekuti kunyangwe nezvose zvatiri kusangana nazvo, isu tichiri nekwaniso yekuzviratidza nenzira ine hushamwari uye tonongedza kuti dambudziko rakakura kudarika zvese zvakanaka zvawave nazvo munzvimbo yebasa, saka tinomanikidzwa kusiya chinzvimbo chedu uye kuti hazvisi kwatiri kuti titore danho rekusiya, asi asi iko kuita kwechiitiko chiri kuitika.
1 Kukosha kwetsamba yekurega basa:
2 Kunyorwa kwetsamba yekurega basa.
3 Heino muenzaniso wetsamba yekurega basa inogona kukubatsira:
Kukosha kwetsamba yekurega basa:
Kupedziswa kwetsamba yekurega basa kana tsamba yekurega basa rako, yakakosha kupfuura iwe zvaunofunga. Iwe haufanire kukanganwa kuti nyika idiki kwazvo uye kuti zvirokwazvo mune rako nyowani basa kana mune isiri kure kure ramangwana, iwe unowana vekare vatinoshanda navo uye vatinoshanda navo, saka zvinonyanya kukosha kuti iwe upedze mukuwirirana nekambani, uve zvine hushamwari nezve zvakashata zviitiko zvawakararama, saka nyora tsamba inoratidzira kuwirirana asi inotaura matambudziko aunofanira kuenda, Izvo zvinokuisa iwe semunhu akatarisa, anoenderana nezviito zvavo uye kuti kunyangwe paine zvakaipa zvese zvakaitika munzvimbo iyoyo, anotenda nguva yakashandiswa uye yakawanda zvakadzidzwa.
Kunyorwa kwetsamba yekurega basa.
Kana danho rangoitwa uye nguva yasvika yekuti upe pachena kusiya basa, tinofanirwa kugadzirira kuita chaizvo tsamba yakanaka yekurega basa. Uye kune izvi isu tinofanirwa kutevedzera zvakateedzana zvezvinodiwa mukugadzirira kwayo, izvo zvatinozotsanangura.
1. Iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti iye munhu anotungamira yenzvimbo yevaridzi yenzvimbo kana muchiitiko chekuti hamuna dhipatimendi rakadai mukambani yenyu, director ndivo vachange vachiona nekuisa mucherechedzo tsamba yekurega basa kana kusiya basa yamunopa. Izvi zvakakosha kuve nemvumo inobatsira iwe kuratidza kana kupembedza kuti hauna kuzivisa kambani nezvezvinangwa zvako zvekusiya basa rawakapihwa, nekuwedzera, kubva panguva yaunopa tsamba iyi, chiziviso chinogadzirwa icho zvinowanzoitika mazuva gumi nemashanu pamberi pechiri iko kuendeswa kwetsamba yekurega basa nemusi iwo wausingazomhan'ara kubasa. Asi izvi zvinoenderana nechibvumirano chako, sezvo vamwe vakasimbisa kuti nguva yekuzivisa inofanira kunge iri mwedzi mumwe kana imwe nguva yakatarwa muchibvumirano. Kana iyi iri nyaya yako, uchafanirwa kutevedzera uye kumirira zuva racho kunze kwekunge chibvumirano chehukama chasvitswa nekambani kuitira kuti ubve kubasa nguva yakatarwa isati yasvika.
2. Rangarira kuve wakanaka kukambani mawakashanda, pamwe mune ramangwana uchashanda kukambani iri kubva kubazi rimwe chete kana kugona, izvo zvinova nechokwadi chekuti mumakongiresi nezviitiko kana mimwe misangano uchakwanisa kusangana nevanhu vanoshanda mairi (vekare vaaishanda navo) kana naiye waive wako mukuru. KANA kambani yako nyowani inogona kuita sarudzo kukutumira kuhukama hwevashandi nekambani yapfuura, kana kugadzirisa uko kunowanikwa makambani ese ebazi revashandi uye zviri pachena kuti uchakwanisa kusangana nevepedyo navo. Ndosaka zvichikosha kuti iwe upedze hukama hwako hwevashandi nenzira ine hushamwari kuitira kuti mune ramangwana kambani yako uye zviripachena ubatsirwe.
Heino muenzaniso wetsamba yekurega basa inogona kukubatsira:
Zuva, mwedzi uye gore zvakapindirwa kuruboshwe kwesheet.
Kunaani zvinganetseke (kana kana iwe uchinyatsoziva kuti ndiani anonyorerwa, nyora pasi mazita avo) zvakare kuruboshwe.
Ini ndinonyanya kukoshesa zvese zvandakadzidza pasi pekuvanda kwekambani iyi, ruzivo rwakawanikwa uye kurapwa kwakagamuchirwa mukati menguva yenguva yandinoshanda mairi (pano iwe unonyora zita rekambani) kwandakakwanisa kuita basa rangu nekugutsikana kuzere pasi pechinzvimbo che (apa iwe unonyora pasi chinzvimbo chawaive nacho mukambani)
Pasina kupokana, hupfumi hwevanhu hwahwo (zita rekambani) ndizvo zvandinokoshesa zvakanyanya, kuve ndakakwanisa kuve chikamu cheboka rakakura rebasa mukuwedzera kune ruzivo rwese rwakawanikwa, zviitiko uye nzira nyowani akandidzidzisa. (zita rekambani).
Zvirongwa nemapurojekiti andaive chikamu chazvo uye izvo zvandaikwanisa kukudziridza zvave zvichinyanya kukosha kwandiri uye zvazove chimwe chezvikomborero zvangu zvakanyanya pakushandira kambani iyi. Chaizvoizvo, izvi ndizvo zvinondibatsira uye zvinondipa shungu zvino pandinofanira kuendesa chigaro changu kubva pachinzvimbo che (chinzvimbo chawaive nacho) kwandaishanda nekuita nechido chikuru. Asi ichi chikuru chinetso chehunyanzvi chekusiya basa rangu chinoita kuti nditore mahon'oni matsva nekuda kwechikonzero ichi, ndinokuzivisa kuti ndiri kusiya chinzvimbo changu se (basa rawanga uchiita).
Pasina kuenderera mberi kwechinguva, ndinotenda kwazvo kuvimba kwakaiswa mandiri munguva yenguva yandakashandira kambani iyi.
Unofanira kunyora pasi zita rako rizere.
Mushure meichi chiratidzo.
Ichi chingave chinongedzo kuti iwe ugone kunyora yako yekusiya tsamba nemazvo uye zvine hushamwari.
Zvakakosha kukuyeuchidza iwe kuti une rusununguko rwese semushandi kuratidza pachena zvako kusiya basa kana kusiya basa, pasina kupa tsananguro yechikonzero icho chinoruramisa. Iwe unongofanirwa kuremekedza nguva dzakatarwa dzakambotaurwa muchibvumirano chebasa rakataurwa. Kunyorwa kwetsamba kunogona kutsanangura chikonzero, asi kuti zviite kunge zvine hunyanzvi uye kukurongere semunhu ane huchokwadi uye akavimbika, zvirinani kuzviuraya.
Iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti kana ukasapa iyi tsamba yekusiya basa, semushandi ari pasi pekambani iyoyo ucharasikirwa nekodzero dzese kune chichava chikwereti chekumisa chibvumirano, sezvo uri kusarudza kumisa nebasa iro, zvinopesana kune aripo kudzingwa kwausiri mumamiriro epamutemo ekushaiwa basa wakatora danho rekusiya chinzvimbo, saizvozvowo hauzove nekodzero yekuwana mabasa ekushaya basa kana kunonzi kushaiwa basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Tsamba yekurega basa
Inguva yekutenga mapizi muhomwe?
Yakagadziriswa kana inoshanduka mari?